प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुललाई दिँदा के हुन्छ?
नेपाल लाइभ सोमबार, चैत १७, २०७६, १०:५२
काठमाडौं- कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण यो सिजनको इंग्लिस प्रिमियर लिग सकिएन भने उपाधि लिभरपुललाई दिने या नदिने? दिँदा के हुन्छ र नदिँदा के हुन्छ? यो विषयमा बहस चल्न थालिसकेको छ।
लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलको २९ खेलबाट ८२ अंक छ। ऐतिहासिक उपाधि चुम्न चाहन्छ लिभरपुल। तर अहिले कोरोना भाइरस मुख्य बाधक बनेको छ।
यता लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीको २८ खेलबाट ५७ अंक छ। अर्थात लिभरपुल भन्दा २५ अंकले पछि। विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि इंग्लिस प्रिमियरका बाँकी खेल स्थगित भयो। जुन १ तारिखसम्म प्रिमियर लिगका बाँकी खेल सक्ने फुटबल एसोसिएसनको तयारी छ। तर कोरोनाले अझै कस्तो रुप लिन्छ बाँकी विषय त्यसमा भर पर्छ।
लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुललाई नै प्रिमियर लिगको उपाधि दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि सुनिँदै छ। उपाधि दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि उतिकै रायहरु आइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर इल्काए गुन्डोगनले भने लिभरपुलको पक्षमा आफ्नो राय राखेका छन्। ‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण प्रिमियर लिग पूरा भएन भने उपाधि लिभरपुललाई दिनु पर्छ।’ गुन्डोगानले भनेका छन्, ‘खेलाडी भएर निष्पक्ष हुनुपर्छ। लिभरपुललाई उपाधि दिँदा ठीक हुन्छ।’